Posted on Dai 15, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Kana uri wiricheya mushandisi kana kugara nemunhu anoshandisa wiricheya, iwe unogona kuziva kuti zvakaoma sei kufambisa wiricheya mukati mese imba kana isina nzvimbo yakakwana kana kufambidzana nzvimbo. Kune nzira dzakawanda dzekuita kuti zvive nyore kugara pamba wiricheya izvo zviri nyore kugadzirisa. Pazasi pane nzira shanu dzekugadzirisa imba yako kuti ive wiricheya inoshamwaridzika.
1. gadza ramp
Paunenge uine nhanho dzinokutungamira iwe kumusuwo, kuisa iyo ramp inzira huru yekubvisa kunetsekana kwe kushandisa matanho. Icho chiri kuvandudza kukuru nokuti wiricheya mushandisi kupinda mumba nekukurumidza. Usati waisa ramp, tarisa nzvimbo yako kana iri kunodiwa kuisa njanji pane kumwe kukwirira.
2. Wedzera magonhi
Kufamba nepasuo nhete idambudziko hombe vanoshandisa wiricheya. Kugadzirisa iyi nyaya, iwe unofanirwa kuve nemikova yako yekukudza nekucheka muhombe muhombe kuti iite yakafara.
3. Sarudzo dzepasi
Haasi ese mataera epasi ari wiricheya ushamwari. Kapeti nemaragi zvinogona kuita kuti zviomere mushandisi wewiricheya kufamba-famba nekuda kwekushata kana gobvu. Zvakanakisisa kushandisa kapeti yakapfava kana kuti uriri hwakaoma, hwakadai sehuni uye mataira, mumba mako.
4. Isa mabhawa ekubata
Mabhawa ekubvuta chishandiso chikuru kune vashandisi vewiricheya kuve nacho kugadzikana kudzivirira njodzi yekudonha. Ivo anonyanya kuiswa mubathroom kunyanya padivi pechimbuzi uye mushawa. Kazhinji, kubata mabhawa kunobatsira mune dzimwe nzvimbo dzedzimba kana kugadzikana kuri inoda.
5. Midziyo inogadziriswa
Adaptive michina inouya nenzira dzakasiyana uye saizi. Izvi midziyo batsira mushandisi wewiricheya kuita mamwe mabasa akazvimiririra kana ari mukicheni kana muimba yekugezera. Semuenzaniso, unogona kugadzira kicheni ne midziyo kubvumidza wiricheya mushandisi kuzvimiririra kana kubata zvinhu. Iwe unogona zvakare kuwedzera iyo chair yekugeza muimba yekugezera. Dzvanya pano kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvekugezesa michina.
Shower Chair ine Back Support
Kuti uwane mamwe mazano ekuita kuti imba yako ive nehushamwari pawiricheya, tarisa mufananidzo uri pazasi. The mufananidzo unopa kuraira kukuru kwekamuri yega yega. Dzvanya pamufananidzo kuti uone zvakajeka.